Musharrax Maxamuud Khaliif Jebiye oo lacag ugu deeqay isbitaalka iyo garoonka kubadda cagta ee Waaciye
November 21, 2018 (WAACIYE) – Musharraxa xilka Madaxwaynaha Puntland ee sannadka 2019, Injineer Maxamuud Khaliif Xasan Jebiye ayaa lacag ugu deeqay isbitaalka iyo garoonka kubadda cagta ee degmada Waaciye.
Musharraxa ayaa $10,000 (toban kun oo doollar) ugu deeqay garoonka kubadda cagta ee Waaciye. Dhismaha garoonka oo xilligan qabyo ah, waxaa bilaabay Ururka Dhallinta Is-xil-qaameyaasha Puntland oo kaashanaya bulshada degmada Waaciye.
Sidoo kale, Musharraxu wuxuu $15,000 (shan iyo toban kun oo doollar) ugu deeqay Isbitaalka degmada Waaciye ee gobolka Karkaar. Lacagtan ayaa qayb ka noqon doonta kharashaadka ku baxaya ballaarinta qaybta bukaan-jiifka ee isbitaalka.
Bulshada degmada Waaciye ayaa uga mahadceliyey Injineer Maxamuud Khaliif Xasan Jebiye kaalinta uu ka qaatay horumarinta degmada Waaciye, iyagoo ballan qaaday in ay sii joogtayn doonaan taageerada ay u hayaan Ololaha Karti iy Hufnaan.